Akụkọ - Diski na-egweri diamond maka egweri ihe, Terrazzo, Nkume elu
Nkọwa ọkachamara nke diski egweri diamond na-ezo aka n'ihe eji eme ihe na-egweri diski a na-eji na igwe na-egweri, nke mejupụtara ahụ diski na akụkụ nke diamond. A na-ejikọta akụkụ diamond ma ọ bụ tinye ya n'ahụ diski ahụ, na-arụ ọrụ dị ka ihe ọkụkụ na ala nkume nke ọma site na ntụgharị ọsọ ọsọ nke grinder.
N'ihi njirimara nke abrasives diamond, diamond abrasives aghọwo ngwá ọrụ dị mma maka ịkwanye ihe siri ike na elu ala. Ọ bụghị naanị na ha nwere arụmọrụ dị elu, nkenke dị elu, ma nweekwa ịdị nro dị mma, obere abrasive oriri, na ogologo ndụ ọrụ. Ọ nwekwara ike melite ọnọdụ ọrụ.
A na-ejikarị diski egweri diamond eme ihe maka polishing marble, granite, ceramics, nkume wuruwuru, wdg, karịsịa maka iwu mgbidi mpụta na ihe ịchọ mma, ọkwa mpaghara nke ala na marble na granite decorative plates. Ọ nwere uru nke ngwa ngwa na-egweri ọsọ na ogologo ndụ.
N'okpuru ebe a bụ otu n'ime efere na-egweri diamond a na-ahụkarị, ha dabara na ọtụtụ isi otu isi 250mm (Blastrac BGP-250 na BGS-250 / Norton Clipper GC250 / DFG 400 / TCG 250), n'ozuzu weld 20 pcs 40 * 10 * 10mm akụkụ rectangle, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ndị ọzọ nke shapes ma ọ bụ nọmba, anyị nwekwara ike hazie isi na gị arịrịọ. Grits 6#~300# dị. Njikọ dị nro, nkekọ ọkara, njikọ siri ike bụ nhọrọ iji kwado elu ala siri ike dị iche iche. A na-ejikarị ha eme ihe maka egweri ihe, terrazzo na nkume elu, nwekwara ike iji maka epoxy, gluu, iwepụ agba.
Nke a bụ atụmatụ ndị ọzọ nke efere egweri diamond maka ntụnye aka gị.
Ewezuga diski egweri diamond, anyị na-arụpụta ụdị ngwaọrụ dayamọnd niile, dịka diamond egweri akpụkpọ ụkwụ, diamond iko wiil, paịlị polishing diamond, pcd egweri ngwaọrụ wdg. Nabata na ajụjụ gị.
Oge nzipu: Nov-02-2021